Waa kuwee arrimaha ugu muhiimsan ee lagu ogaanayo cilmi-baarista muhiimka ah ee Amazon?
Waxaan u maleynayaa in cilmi-baaris dhamaystiran oo ku-oolka ah ee Amazon lagu go'aamiyo inta badan qodobbada muhiimka ah ee muhiimka ah (sida ugu dhow ee loo eegayo codsashada raadsashada ee isticmaalaha), iyo heerka heerka tartan ee hadda (sida ay u adagtahay inay noqoto darajo). Waxay u egtahay mid aan maskaxda ku hayn, laakiin hadafka ugu muhiimsan ee cilmi-baarista keydka ah ee Amazon waa in la helo kuwa ay ku guuleystaan ​​laakiin wali ma aha shuruudaha raadinta badeecada ee aadka loo jecel yahay iyo isku-dhafka dheeraadka ah ee ay isticmaalaan dukaamada guryaha iibsada. Laakiin sida loo sameeyo horumarka dhibcaha si sahlan si aad u aragto liiska maqalka ee muuqaalka internetka sida jahannamada?
Waxaa jira dhowr siyaabood oo aad ku heli karto:
Ku shaqeynta cilmi-baaris doorka muhiimka ah oo la isticmaalayo Amazon auto-fill option. Habkaas, kaliya ma heli kartid isla markiiba inaad hesho sawir weyn oo ah midka ugu muhiimsan ee isku dhafan ee la xidhiidha qaybta alaabada ama shey gaar ah oo si gooni ah loo qaato, laakiin fahamsan waxa raadinta keywords ujeedooyinka dukaamada maxaliga ah ay u badan tahay inay u qaadato raadintooda alaabta marka la muujiyo farsamo-soo-jeedin soo-saarka amma algorithm.
Aqoonsiga ereyada muhiimka ah ee la qadariyay. Waxaan ula jeedaa shuruudaha raadinta ee mugga raadinta aadka u sarreeya, walina wali tartanno yar yar. Taasina waa sababta ay weli u jirto tiro aan ku filnayn oo ah badeecooyin la xiriira iibka kuwaas oo lagu qeexay erayga muhiimka ah ee hadda jira. Natiijo ahaan, kuwa aan weli dhicin wali si buuxda u shaqeynaya shuruudaha raadinta iyo isku-dhafka dheeraadka ah ayaa si macquul ah u noqon kara mudnaantaada lambarkaaga ah ee cilmi-baarista keydka ee Amazon.
Helitaanka ereyada muhiimka ah ee hadda jira ee muuqda. Guud ahaan, ereyada muhiimka ah ee tira yar ayaa ah mid aad u adag, ugu yaraan daqiiqad. Laakiin guulahoodii ugu dambeeyay ee mugga raadinta (tusaale ahaan, illaa bilihii la soo dhaafay) waxay xaqiiqdii u qalantaa in lagu qiimeeyo bartilmaameedyada ugu muhiimsan ee cilmi-baarista calaamadaha muhiimka ah ee Amazon.
Iyada oo la socota ereyada muhiimka ah iyo isku-dhafka raadinta badeecadaha dheer-dheer, tayada liiska ganacsatadaada gaarka ah iyo sida ugu fiicnaantu waa arrimo muhiim ah. Waxaan loola jeedaa in aad haysato ballan aad u macquul ah ee ereyada muhiimka kuu ah. Laakiin helitaanka iibsashada iyadoon jirin nidaam habboon oo ku saabsan liis gareynta alaab-celinta ayaa si aan macquul ahayn u dilaysa ganacsigaaga ganacsiga muddo ka dib. Taasi waa sababta aad u hubineyso inaysan jirin wax xaddidaad ah oo ku saabsan soo-galitaankaaga liiska ee raadinta internetka. Sidaa darted, waxaan kugula talinayaa inaad haysatid labajibbaar arrimo ku saabsan qodobbada soo socda ee lagu ogaanayo natiijooyinka muhiimka ah ee muhiimka ah ee Amazon:
Qeexitaanka alaabta waa in lagu qoraa meel ku dhow 250 eray oo lagu taageerayo liis shan dhibcaha rasmiga ah, mid kasta oo si buuxda u sharaxan laakiin wali nadiif ah oo kooban.
Sawirada wax soo saarka waa mid aad muhiim u ah. Iyo ma aha oo kaliya in aad hagto martidaada si go'aanka ugu dambeeya ee lagu iibsado adiga, laakiin sidoo kale ujeedooyinka ra'yi raadinta iyo sidoo kale. Waxyaabahani waa in Amazon ay aqoonsan tahay qayb ka mid ah waxyaabaha muuqaalka ah ee taageerada ah sida garab isku mid ah oo xooggan oo go'aamiya tayada liiska alaabtaada Source .